उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, रातारात बन्नुहुनेछ धनी ! – Sandesh Press
काठमाडौँ । धनी बन्न को चाहदैँन ? सबै मानिस सुखमय जीवन व्यतित गर्न चाहान्छन् । त्यसैले त दिनरात नभनी काममा लागिरहेका पनि हुन्छन् ।यदि तपाई पनि रातारात धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने बिहानै बिस्ताराबाट नउठ्दै यस्ता काम गर्नुपर्छ ।
व्यवहारिक अर्थशास्त्रका पिता रिचर्ड थेलरले नोबेल पुरस्कार जितेपछि भनेका थिए, धनी जो कोही पनि बन्न चाहन्छ, त्यसैले धनी बन्नका लागि सही दिशा तय गर्नुपर्छ ।
एउटा कथन छ कि बिहान जस्तो हुन्छ दिन पनि त्यसैरी नै बित्छ । अर्थात् बिहानीले दिनको संकेत गर्छ ।
केही काम भने बिहान गरेमा सुख समृद्धि आउँछ । बिहान उठेपछि स्नान गनुपर्छ । धार्मिक पुराणमा दिनको शुरुवात स्नानबाट हुनुपर्ने बताइएको छ ।
यसले दिनभरको उर्जा सञ्चय हुन्छ । स्नानपछि तत्काल नै भगवानको नाममा दियो बाल्दा पनि समृद्धि आउँछ ।
पूजापाठ, भगवानको नामको जप गरेमा सुखसमृद्धि साथमा हुन्छ ।काठमार्डाैँ । मानिसहरुले गर्नुपर्ने नित्य कर्मका बारेमा शास्त्रले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । हामीले मात्र अनुसरण गरे दैनिक जीवन सहज हुन्छ।जोतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने रातिको समयमा पनि केही त्यस्ता काम गर्नुपर्छ जसले तपाईको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाउँछ ।
Prevरातको समय घरमा यी काम गर्नुहोस्, सँधै मिल्छ घरमा सुख समृद्धि
Nextदशैँको मुखैमा भखरै मुगुमा घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना , ३९ जना यात्रु बोकेको बस पल्टियो, २३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु